Qondaaltonni TPLF Isaayyaas Afawarqii dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuu balaaleeffatan
(BBC Afaan Oromoo) — Tibba kana pirezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afawarqii TV biyyoolesaa wajjin af-gaaffii taasisaaniin dhimmi daangaa Itiyoo-Eertiraa akka hin goolabamneef TPLF gufuu ta’eera jedhanii dubbatanii turan.
Pirezidaantichi waa’ee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisuun af-gaaffii taasisan keessattis, hariiroo biyyoota lamanii ilaalchisuun akka dubbatanitti,’ Dhimma daangaa fi Baadimmeetti qofa otoo hin daangeffamiin jijjirama Itoophiyaa keessa jiru humna keenya guutuudhaan deeggarraa’ jedhanii turan.
Pirezedant Isaayaas ‘Dhimmi Itoophiyaa harka maranneetuma kan ilaallu miti’ jechuudhaan dubbachuunsaanii, qondaaltotaa fi qabsaa’ota TPLF hedduu hin gammachiifne.
Waldiddaa Itiyoo-Ertiraa hinxumuramiin hafe
Rogeeyyin Ertiraa Gamtaa Awuroppaa komatan
‘Dhimma biyyaa keenya keessa seenani’ jechuun pirezedaanticha qeeqaniiru.
Ministirri Hajaa Alaa Itoophiyaa duraanii obboo Siyyum Masfin fi Pirezidantiin naannoo Tigiraay duraanii Obbo Tsaggaayi Barihee waltajjii ayyaaneffannaa Sadaasa 11 irratti argamuun pirezedaanticha ifatti qeeqan.
Obbo Tsaggaayi torban darbe magaalaa Maayi Tsabiriitti akka dubbatanitti, Pirezidant Isaayyaas ‘dhimma Itoophiyaa gidduu harka yoo seensise harkasaa cabsuu malee waan fidu hin qabu,’ jedhan.
Obbo Tsaggaaayi Barihee
‘Kuni dhimma biyya keessaa Itoophiyaati, Pirezedaant Isaayyaas hin illaallatu’ kan jedhan obbo Tsaggaayi, ”Lammileen Itoophiyaafi mootummaan Itoophiyaa kan mormuu qabu,’ jedhanii dubbatan.
‘Biyya keenya diiguudhaaf kana raawwataa jira’ jechuudhaan kan himatan yoo ta’u, ‘Yeroo lamaaf sadii itti haa yaadani jechuun akeekkachiisaniiru.
Guyyaa kaleessaa (Dilbata) magaalaa Aksumitti guyyaa hundeeffama TPLF ganna 45ffaan kabajameerratti argamuudhaan obbo Siyyum Masfin haasaa isaanii keessatti qeeqa jabduu dhageessisan.
‘Isaayyaas Afawarqiin Wayyaanee fi heera Wayyaaneen ijaartee nan diiga,’ jechuun salphina jedhu.
‘Heera kana diiguuf kan dhufu jiraannaan inni Mosoloniidha. Hitilari,’ jechuudhaan qeeqa jabduu dhiyeessan.
Itti dabaluudhaaniis, ‘Isaayyaas uummata Eertiraa harka walakkaa bittimsee ka’ee, biyyatti otoo bulchuu hin dandeenye Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti nageenyaafi misoomaa fiduu hin danda’u,’ jedhaniiru.
Uummanni Eertiraa akkuma lammileen Itoophiyaan gochaa jiran Isaayyaas ‘jalqabarratti dhimma biyya keessa furuu qabu’ jechuun obboo dhaamsaa obbo Isaayyaasiif dabarsan.
Sana booda mootummaan tokko kan biroo keessa otoo harka hin seensifatiin hojjachuu dandeenyaa jedhan obbo Siyyuum.
Amma dura dura waajirri TPLF dhimmicharratti ibsa kennu akka hin qabne BBCtti himee ture.
Tigreenis Limimmidii itti jabeessitee jirti.
Previous articleGurmeessaa Goobanaa: Barataan yuunvarsiitii Arsii kun kalaqawwan 25 qaba
Next articleEthiopia’s naive peacemaking could lead to war
Abbaa-Muudaa Madda-Walaabuu February 17, 2020 At 9:53 pm
Ummatni Oromoo fii sabootni federaalizimii dhugaatti amantan murtiin ummata Tigraay waan kuni dhimma dhuunfaa Tigraay qofaa ta’uu dhabuu hubachuun ummata Tigraay cinaa dhaabbachuun jaalala biyya waloo keenya Itiyoophiyaaf qabnu mirkaneessuu qabna. Wal diddaan siyaasaa Oromiyaa fii Tigraay gidduu hin jiru. Waa’een namoota dhuunfaa aangootti seeraan ala fayyadaman jedhamuus yoo ta’e dhimma gaafa mootummaan dhugaa ummataan filatame qoratamee seeraan falli itti barbaadamu malee dhimma biyyi alaa sanuu Eertiraan harka itti naqattee akka borcitu hayyamuufii hin qabnu. Abiyyi, nama basaasaa yakkoota hedduu Oromiyaa fii lammii Itiyoophiyaa hundaa irratti waggoota 27raaw’atchaa turee fii waggaa lamaa as ammoo Oromoo fakkaatee aangoo erga qabate booda Oromummaa xireeffatee hariiroo seenaa Guraageen Eertiraa wajjiin qabdutti fayyadamee ija isaa ashaboon dhiqatee ummata Amaaraa
dogongorsuu fii ummata Oromoos guyyuma adiin gowwoomsuuf dhama’aa jira.
Bara 1983 irraa kaasee paartiin Itiyoophiyaa bulchaa turee fii har’a
Abbaa-Muudaa Madda-Walaabuu February 17, 2020 At 10:41 pm
ilee paartiin Itiyoophiyaa bulchaa jiru tokkicha. Sabni mootummaa federaalaa keessatti bakka bu’umsaa fii aangoo dhabe hin jiru. Mallas yeroo aangoo irra jiru dhalattootni naannoolee Soomaalee, Affaar, Harargee, Gam-bal’aa fii Banii Shan Guul fii Gumuz aangoo ministira federaa fii jal-dhaaba ministira federaalaa hedduu qabatanii itti dhimma bahaa turanis, har’a olola Abiyyi miidhagsinee fakkaannee bulla, toofaan Abiyyi male kuni aangoo irra nu tursiisa jedhanii seenaa hin jirre xibaaruun ykn dunquqquun guyyaa kuni gonkumaa waan isaan milkeessu miti.
Ani akka dhuunfaatti hojii gaarii Abiyyiif nan quudha, dandeettii basaasummaa fii shiraa
isaas nan raajeffadha. Kanas ta’ee sana ijoon dubbii qabsoo Abiyyi tooftaa burjaajessaa adda addaa tiin paartii bara 1983 irraa kaasee Itiyoophiyaa quuncisee nyaatchaa ture, qorqatchaa akka inni umrii dheereffatu gochuun yakkoota dalagan irratti ofumaa akka murteessan gochuu dha.
Hooggansi Abiyyi akka aangoo irra turu namni barbaadu nama sanyii
Oromoo balfuu fii nama
Abbaa-Muudaa Madda-Walaabuu February 17, 2020 At 11:29 pm
dhiigni ilmaan Oromoo dhugaa isaanii tiif qabsoo bara dheeraa
wareegamanitti nama qoosuu barbaade qofaa akka tahe hubachuu qabna.
Tokkummaan Oromoo akka lalisu Oromoon barbaadu diinaan kolbamee Oromoo raatessuu hin qabu.
Oromoon maaliif akka hadoode hin beekne malee Abiyyi galma barkumeetti ummata fuula dura dhaabbatee dubbii fokkoo fii qaanessoon nama Oromoo arraba isaa tiin salphisuu yaalee dha.Mukni Odaa saala lama (2) qaba, waggaa tokko keessatti ji’a 6 saala dhiiraa, ji’a 6 ammoo saala dubartii qaba jedhee Afaan Amaaraa tiin Oromootti baacee jira. “Wanti xiqqoon, nama xiqqeessiti” jedha Oromoon yoo mammaaku.
Abbaa Muudaa Dhugaa Soraa Lubbuu Waaqaa Lafaa Waaqa-Aanfatnaa Biyya Dhugaa Mirkanaa Itiyoophiyaa Isa Saba Horoo (Oromoo) Gosni Shaggar Qubaan Madda Walaabuu